စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာ အယူဝါဒများ – War, Peace And World Religions | MoeMaKa Burmese News & Media
စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာ အယူဝါဒများ – War, Peace And World Religions
(ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော၊
အယူဝါဒ ရှိသူ တစ်ဦးချင်း ဘာသာလမ်းညွှန်ချက် ကောက်ယူပုံ မှန်ကန်စွာနဲ့ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံဖို့ အရေးကြီးတဲ့ သဘော၊
ဘာသာအယူဝါဒ ကွဲပြားသူချင်း ခွဲခြား ဖိနှိပ်ဖို့မလိုတဲ့ သဘော၊
စနစ်တကျ ပညာရပ်ဆန်ဆန် ဘာသာအယူဝါဒတွေကို လေ့လာခြင်းဖြင့်
အယူဝါဒ မတူသူချင်း ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရင်း လူ့လောက တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့ သဘော —
အနှစ်ချုပ်ကဒါပဲ.. ဟု စာရေးသူက ဆိုပါသည်။)
ရှေးအစဉ်အဆက်ကနေ မျက်မှောက်ခေတ်အထိ မတူညီတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ အဆုံးစွန်ဖြစ်သွားရင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ ဟာ လူအများစု ကိုးကွယ်အားထားရာဖြစ်တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒတွေ မတူညီတဲ့ အပေါ်မှာ အခြေခံတာကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ အဓိက ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ အတွေးအခေါ် တွေမှာ စစ် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဘယ်လို လမ်းညွှန်သွန်သင်ထားလဲ၊ ဘာသာရေး ဟာ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အကြောင်းလား (သို့) ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အသံ လားဆိုတာကို ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်း လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေရဲ့ သဘောဟာ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဘာသာအယူဝါဒ တူ အုပ်စုချင်းမှာတောင် ဘာသာရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပုံချင်း၊ လိုက်နာကျင့်သုံးပုံချင်း တူညီလေ့မရှိဘဲ အယူအဆ အထွေအထွေ၊ ဂိုဏ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ထားရပါမယ်။
စစ်ပွဲအပေါ်အမြင်များ – အမှား (Wrong)၊ တရားမျှတမှု စစ်ပွဲ (Just War)၊ ဘာသာရေး စစ်ပွဲ (Holy War)
ဘာသာအယူဝါဒအားလုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဝါဒီတွေက ပြဿနာတခုကို စစ်ပွဲအဖြစ် အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် လူ့အသက်ကို အန္တရာယ်ပြု ဖြေရှင်းခြင်း ဟာ လုံးဝ မှားတယ်လို့ မြင်တယ်။
တချို့ အယူဝါဒတွေမှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတချို့က တရားမျှတမှု ရှိဖို့အတွက် မလွှဲမရှောင်သာ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေ နည်းလမ်းတကျ စစ်ပွဲတွေကို တိုက်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်တဲ့ တရားသောစစ်ပွဲတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ မြင်တယ်။
တချို့ ဘာသာတွေမှာ လူတချို့ကတော့ မိမိရဲ့ အယူဝါဒ အပေါ် (သို့) ကိုးကွယ်ခွင့် အပေါ် အခြား ဘာသာခြားတွေက မတရား ဖိနှိပ်လာခဲ့ရင် မိမိဘာသာအယူဝါဒ ရှင်သန်ဖို့အတွက် ဘာသာရေး စစ်ပွဲတွေလိုတယ်လို့ မြင်တယ်။
အခု ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ငြိမ်းချမ်းရေး (ဝါ) အကြမ်းမဖက်မှုအတွက် ဘယ်လို လမ်းညွှန်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ကမ္ဘာ့ အထင်ကရ ဘာသာကြီး (၃) ခုဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဆစ်(ခ်) အယူဝါဒတွေဟာ အိန္ဒိယမှာ အစပြုခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းမဖက်ရေး ဝါဒကို လက်ကိုင်ပြုတယ်။ ဒီ အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒ ဟာ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး ဘာသာအယူဝါဒတခု ဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူ ဘာသာရဲ့ (Ahimsa) ကို အခြေခံတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “Non-Violence” ဟာ တကယ်တော့ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ (၁၈၆၉-၁၉၄၈) ခေတ်ရောက်မှ သူက “Ahimsa”, “Avoiding Harm to others” (အခြားသူမျာအား ထိခိုက်နာကြင်စေမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း) ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီး စတင် တီထွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဟိန္ဒူ အယူဝါဒ (Hinduism) (၂၀၀၀ BCE) (စတင်တည်ထောင်သူ သီးသန့် မရှိ)
ဟိန္ဒူဘာသာဟာ ကမ္ဘာမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှ ဂျူးဘာသာ ပြီးရင် ရှေးဦးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဘာသာအယူဝါဒကြီးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒီ အယူဝါဒ စတင်ထွန်းကားချိန်ကစပြီးတော့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာ အကြမ်းမဖက်ရေး (Ahimsa) ကို အမြင့်မားဆုံး ဘာသာရေးလမ်းညွှန်ချက် တာဝန် အဖြစ် ခံယူတယ်။ ဟိန္ဒူဝါဒ ကို အခြေခံပြီး ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဂျိန်းအယူဝါဒ (Jainism) (599-527 BCE) မှာလည်း တသဘောတည်း ပုဂ္ဂလိက စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု လမ်းအတွက် မေတ္တာတရား၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေးကိုသာ ကိုင်စွဲတယ်။
သို့သော် ရှေးဟောင်းဟိန္ဒူ ကျမ်း တစောင်ဖြစ်တဲ့ ဘဂဝါဂီတ (Bhagavad Gita) ကျမ်းပါ အဓမ္မဝါဒီ ကောရဗျ နဲ့ ဓမ္မဝါဒီ ပဏ္ဍဝမင်းတို့ ဖြစ်သော မဟာဘာရတ စစ်ပွဲကြီးမှာ ဟိန္ဒူဝါဒမှာ ထင်ရှားတဲ့ (ဗုဒ္ဓ မတိုင်မီ နောက်ဆုံး ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့) ကရိသျှန (Krishna) ဘုရား က ပဏ္ဍဝမင်းသား အာဇုန (Arjuna) ကို ဟောတဲ့တရားအရ ဓမ္မဝါဒ စိုးမိုးရေးအတွက် တရားမျှတတဲ့ စစ်ပွဲကို တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ့ရတယ်။
ဒါကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင်စစ်စစ် ဂန္ဒီကြီးက ဘာသာရေး ကျင့်ဝတ် ပုံပြင် သဘောအဖြစ်သာ မှတ်ယူပြီး မတရားမှု အဓမ္မကို တွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတာ မှန်တယ်၊ သို့သော် သူတပါး အသက်ကိုတော့ ဘာအတွက်နဲ့မှ မသတ်ရဘူး၊ အကြမ်းမဖက်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းပဲ သုံးရမယ်၊ ဒါမှ ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရ ငြိမ်းချမ်းမှု ကို ပေါ်လွင်စေမယ် လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဝါဒီ ဂန္ဒီကြီး ထာဝရ လက်ကိုင်ပြုတာက.. “ကောင်းဖို့လုပ်တာ ဖြစ်စေဦးတော့.. အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်တယ်..၊ အကြောင်းက ကောင်းမှု ကုသိုလ်ဟာ ခဏတာမျှသာဖြစ်ပြီး မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကတော့ အစဉ်စွဲထင်ကျန်ရစ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်..” ဆိုတဲ့ သဘောပါတဲ့ အလုံးစုံ အကြမ်းမဖက်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရေး အတွေးအခေါ် ဖြစ်တယ်။
ဟိန္ဒူတိုင်း ဂန္ဒီကြီးလို မတွေးနိုင်၊ မမြင်နိုင်၊ မကျင့်နိုင်တာလည်း လက်ခံရပါမယ်။ ဘာသာကျမ်းဂန်ပါ အချက်တွေကို ဘာသာဝင်တဦးချင်း အနက်ကောက်ပုံ မှန်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေလိုတဲ့အတွက် ညွှန်းဆို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ အယူဝါဒ (Buddhism) ၊ ဗုဒ္ဓ (Buddha) (563-483 BCE)
“အမုန်း ကို အမုန်း နဲ့ ဖြေရှင်းချေဖျက်လို့မရ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့သာ ရ၏..။” (ဓမ္မပါဒ)
သတ္တဝါအားလုံးကို မေတ္တာတရားထားဖို့ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ ဗုဒ္ဓ အယူဝါဒ ကလည်း အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို အဓိက အခြေခံတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ – ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ (၁၉၆၁-၁၉၇၅) မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းတော်တွေဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းဖြင့် စစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ နဲ့ သမိုင်း မှာ အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ်အတွက် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတွေ ရှိတယ်။
သို့သော် ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားတဲ့ သီရိလင်္ကာ မှာ လူနည်းစု ဟိန္ဒူဘာသာဝင် တမီလ်လူမျိုးတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှု၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မူတွေ ခံနေကြရတယ်။ အယူဝါဒကွဲပြား၊ အတွေးအခေါ်မတူညီမှုတွေကို နားလည်လက်ခံ ခန္တီပါရမီ (Tolerance) ရင့်သန် ကျင့်ကြံရမယ် လို့သာ ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေရဲ့ ဗမာပြည်မှာ အယူအဆမတူသူတွေကို ထောင်ချ ဖိနှိပ်နေတယ်။ အယူကွဲပြားသူတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကို ခံနေရတယ်။ ဘာသာကွဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခံနေရတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားမြတ်ကို ရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး နာကြား ခံယူခွင့်ရခဲ့ကြပေမယ့် အဓမ္မ စစ်ဝါဒီတွေ နှစ်ဆယ်ဂဏန်းလောက်မျှ ဝါဒဖြန့် သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်၊ အစွန်းရောက်တဲ့ မျိုးချစ်စစ်၊ တဘက်စွန်းရောက် အတွေးအခေါ်တွေဟာ လူအများစုကြား ဝမ်းနည်းဖွယ် ရှင်သန်နေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့.. ပညာမျက်စိ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ (အစွန်းတရားနှစ်ပါးကင်းလွတ်တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်) သီလ (Morality)၊ ပညာ (Wisdom)၊ သမာဓိ (Concentration) အကျင့်များဖြစ်တဲ့ သမ္မာဝါစာ (မှန်သောစကား “Right Speech”)၊ သမ္မာကမ္မန္တ (မှန်သောအပြုအမူ “Right Action”)၊ သမ္မာအာဇီဝ (မှန်သောအသက်မွေးခြင်း “Right Livelihood”)၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ (မှန်သောအမြင် “Right View”)၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ (မှန်သောအကြံ “Right Intention”)၊ သမ္မာဝါယာမ (မှန်သောအားထုတ်ခြင်း “Right Effort”)၊ သမ္မာသတိ (မှန်သောအောက်မေ့ခြင်း “Right Mindfulness”)၊ သမ္မာသမာဓိ (မှန်သောတည်ကြည်ခြင်း “Right Concentration”) တည်းဟူသော ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမ အကျင့်လမ်း(မဂ္ဂရှစ်ပါး “The Eightfold Path”) အမှန်တကယ် ဖော်ဆောင်ဖို့ရာလည်း တိုင်းပြည်မှာ ဝေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်။
ဘာသာအယူဝါဒ ရှိသူတွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံး နဲ့ အဓိက တာဝန်ဟာ ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရ ဓမ္မအစစ်ကို သိနားလည်ပြီး နေ့စဉ် ဘဝမှာ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံဖို့လိုတယ်ဆိုတာ အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေက သက်သေပြုပါတယ်။
“ကမ္ဘာမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ နိုင်ငံတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ မြို့တွေမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ အိမ်းနီးနားချင်း အချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့၊ မိသားစု အိမ်မှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့က ပထမဦးဆုံး လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ နှလုံးသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့ လိုတယ်..။” (လောင်ဇူး)
“မိမိကိုယ်တိုင် မခံနိုင်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို တွေကို သူတပါးအပေါ် မပြုမိပါစေနဲ့..။” (ကွန်ဖြူးရှပ်)
ဗုဒ္ဓ နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ တရုတ်ပြည်မှ လောင်ဇူး (Lao Tse, 580-500 BCE)၊ ကွန်ဖြူးရှပ် (Confucius, 551-479 BCE) တို့ရဲ့ တာအိုအယူဝါဒ (Taoism) နဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ်အယူဝါဒ (Confucianism) တွေဟာလည်း ဗုဒ္ဓဝါဒ လိုပဲ မေတ္တာကိုသာ အခြေခံပြီး အတွင်း စိတ်သဏ္ဍာန် သမမျှတ စင်ကြယ်မှု၊ တရားရှာဖွေ မှတ်ယူမှု၊ အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ် နဲ့သာ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘဝဘုံကို တက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ ညွှန်းဆိုခဲ့တယ်။ အလားတူ ဂျပန်မှာ ထွန်းကားတဲ့ ရှင်တို ဘာသာ (Shinto 100CE) သည်လည်း ကမ္ဘာကြီးဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ မိသားစုအကြီးကြီးသာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် လူသားတိုင်းရဲ့ အသက်ကို တန်ဖိုးထားပြီး လူသားဖြစ်တည်မှု သဘာဝကို လေးစားရမယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဆစ်(ခ်) အယူဝါဒ (Sikhism)၊ ဂုရုနာနတ်(ခ်) (Guru Nanak 1469-1538 CE)
“ရန်သူမရှိ၊ နိုင်ငံခြားသား မရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား သူတပါးအပေါ် မမုန်းရန်၊ အကျိုးအကြောင်း မညီ၊ တရားမမျှတ၊ တဘက်စောင်းနင်း ကြိုတင် ကောက်ချက် မပြုမိစေရန် စွမ်းဆောင်ပေး၏..။” (ဂုရုနာနတ်(ခ်))
ဂုရုကြီး နာနတ်(ခ်) စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဆစ်(ခ်) အယူဝါဒမှာ လူသားတိုင်းဟာ တန်းတူ ဖြစ်တယ်၊ အယူဝါဒပေါင်းစုံကို လေးစားအသိမှတ်ပြုရမယ် ဆိုတာကို အဓိက သွန်သင်ခဲ့တယ်။ ဂုရုကြီး နာနတ်(ခ်) နောက်ပိုင်း ဆက်ခံခဲ့တဲ့ အခြား ဂုရုတွေခေတ်မှာ မိမိဘာသာအယူဝါဒ အပေါ် ဖိနှိပ်ခံနေရရင် တွန်းလှန်ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ညွှန်ကြားပေမယ့် အကြမ်းမဖက်ရေးဟာ ဘာသာရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ ခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲ ပြုရရင်လည်း နောက်ဆုံး ဖြေရှင်းချက်အနေနဲ့ အရပ်သားတွေ မထိခိုက်စေဘဲ သိက္ခာရှိ၊ တရားမျှတတဲ့ စစ်ပွဲ (Dharam Yudh) ဖြစ်အောင်သာ ပြုရမယ် လို့ ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စတင် ထွန်းကားခဲ့တဲ့ အခြား ထင်ရှားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘာသာအယူဝါဒကြီး သုံးခု ဖြစ်တဲ့ ဂျုး၊ ခရစ်ယာန် နဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာ တွေဟာလည်း ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသာ အခြေခံတယ်။ သို့သော် တမန်တော် အေဗြဟံ (Abraham) ရဲ့ သားတော်များဖြစ်တဲ့ အစ္စမေလ (Ishmael)၊ ဧဇက် (Isaac) တို့ရဲ့ မျိုးဆက် ဂျုး၊ ခရစ်ယာန် နဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် သွေးသားအရင်း ညီအကိုတွေဟာ မိမိဘာသာ အသီးသီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတရားတွေကို အပြည့်အဝမဖော်ဆောင်နိုင်ဘဲ အယူဝါဒ ကွဲပြားမှုကို အခြေခံကာ အမုန်း စစ်ပွဲတွေကို တရားသော စစ်၊ ဘာသာရေးစစ် အသွင် ပြုခဲ့တဲ့ အမိုင်းတွေ ရှိတယ်။
ဂျူး အယူဝါဒ (Judaism) ၊ မောရှေ / မိုးဇက် / မူဆာ (Moses 1500-1350 BCE)
က္ကုသရေလ (အစ္စရေး) လူမျိုးတွေရဲ့ တမန်တော် မောရှေ ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှ ယူဆောင်လာတဲ့ လူသားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပညတ်တော် (၁၀) ပါး (Ten Commandments) မှာ လူ့အသက်သတ်ခြင်းကို တားမြစ်တယ်။ ထာဝရဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို အခြေခံပြီး မောရှေ ရေးသာ စီရင်တော်မူခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ တာနာ့ခ် / ဟီဘရူး / ဂျူး သမ္မာကျမ်းစာ (၅) စောင် (Tanakh/Hebrew/Jewish Bibles)၊ တနည်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒမှာလည်းလက်ခံတဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Christian Old Testament) ပထမ (၅)ကျမ်းဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (Genesis)၊ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း (Exodus)၊ ၀တ်ပြုရာကျမ်း (Leviticus)၊ တောလည်ရာကျမ်း (Numbers) နှင့် တရားဟောရာကျမ်း (Deuteronomy) ကျမ်းတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ နှိပ်ကွပ်မှုတွေကို တော်လှန်တဲ့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲ၊ တရားသောစစ်ပွဲ ပုံစံ ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ ညွှန်ကြားမှုတွေ တွေ့နိုင်ပေမယ့် အဓိကတော့ အကြမ်းဖက်၊ သတ်ဖြတ်မှုကို လက်မခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားများသာဖြစ်တယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါ “ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံတွေ့ရရင် အသက်အတွက် အသက်၊ မျက်လုံး အတွက် မျက်လုံး၊ သွား အတွက် သွား၊ လက် အတွက် လက်၊ ခြေထောက် အတွက် ခြေထောက် စီရင်ရမယ်..” (အိပ်ဇိုးဒပ်စ် ၂၁: ၂၃-၂၄) ဆိုတဲ့ သဘောဟာလည်း လက်စားချေမှုပုံစံ ထက် တရားမျှတမှု သဘောကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဂျူးအယူဝါဒဟာ စစ်ပွဲရှောင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ရှောင်လွှဲမရတဲ့ ခုခံရေးစစ်ပွဲတွေအတွက်လည်း လက်စားချေမှုပုံစံ ကင်းကင်း၊ စတင်ရန်လိုမှု မရှိ၊ လူသားဆန်စွာ၊ တရားမျှတမှု ရှိရှိ ပြုမူရမယ်လို့ သင်ကြားတယ်။
“ရန်သူ ဗိုက်ဆာနေလျင် ပေါင်မုန့်ပေးပါ၊ ရေဆာနေလျင် ရေသောက်ဖို့ ပေးပါ..။” (ပရောဘတ် ၂၅:၂၁)
ခရစ်ယာန် အယူဝါဒ (Christianity) ၊ ယေရှုခရစ်တော် (Jesus 1-33 CE)
“တစ်စုံတစ်ယောက် က သင့်ရဲ့ ညာဘက်ပါးကို ရိုက်ပါက သင့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးကိုပါ အရိုက်ခံဖို့ အဆင့်သင့် လှည့်ပေးလိုက်ပါ..။” “သင့်ရဲ့ ရန်သူကို ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ထားပါ..။” (ဓမ္မသစ်ကျမ်း၊ ရှင်မဿဲ ၅: ၃၈-၄၅)
ခရစ်ယာန် ဘာသာရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော် သမိုင်းမှာ လုံးဝ အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတ စစ်၊ ဘာသာရေး စစ် ပုံစံမျိုးစုံ ရောယှက်နေခဲ့ပေမယ့် ယေရှုခရစ်တော် ဟောခဲ့တဲ့ တရားတွေကတော့ အကြမ်းမဖက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုသာ အဓိက ရှေ့ရှုတယ်။ နောက်ပိုင်း ရောမ ဧကရာဇ် ကွန်စတင်တိုင်း (Roman Emperor, Constantine the Great, 272-337 CE) ခေတ်မှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို အင်ပါယာ တစ်ခုလုံးရဲ့ တရားဝင် ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာရေး ရောထွေးလာကာ စစ်ပွဲတွေဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘာသာရေး စစ်ပွဲ (ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ) ပုံသဏ္ဍန် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
မိမိကို သတ်ဖြတ်ဖို့ လာရောက်ဖမ်းဆီးသူတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ ခွင့်မပြုဘဲ၊ နောက်လိုက် တစ်ယောက်က စလာဖမ်းချင်း တုန့်ပြန်ခုခံလိုက်လို့ ဒဏ်ရာ အနာတရ ရသွားတဲ့ ရန်သူကိုတောင် ဆေးကု ပေးခြင်းဖြင့် မေတ္တာတရား ကြီးမားဖို့ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်၊ စွန့်လွှတ် အနစ်အနာခံ ဥပမာပြုခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ သားတော်၊ သမီးတော်၊ နောက်လိုက်တွေဟာလည်း မျက်မှောက်ခေတ်အထိလည်း အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးရေးပုံစံ၊ တရားမျှတမှု ပုံစံ စစ်ပွဲတွေ ပြုလုပ်နေရသေးတာဟာ တနည်းအားဖြင့် ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်။ သို့သော် ရိုမန် ကက်သလစ်၊ အင်္ဂလိကန်၊ မက်သဒစ် အစရှိတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေ တလျှောက်လုံး သွန်သင်ဆုံးမလာခဲ့တာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ ကွေကာ (Quakers) တွေ၊ အာမစ်ရှ် (Amish) တွေလို အလုံးစုံ အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒကို အမြဲမပြတ် စွဲကိုင်ထားတဲ့ ခရစ်ယာန် အုပ်စုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အစ္စလာမ် အယူဝါဒ (Islam) ၊ မုဟမ္မဒ် (Muhammad 570-632 CE)
“ဘုရားသခင်သည် လူသားအပေါင်းကို တစ်ခုတည်းသော မျိုးနွယ်မှ ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတွေ၊ လူမျိုးစုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် လူသားအချင်းချင်း သိကျွမ်းရင်းနှီးချစ်ခင်ဖို့သာ ရှိပြီး ရန်လိုမုန်းထားပြုမူစရာ မလို..။” (ကုရ်အာန်ကျမ်း၊ ဆူရာ ၄၉:၁၃)
အစ္စလာမ် ဘာသာဟာ အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ဘာသာကြီးတွေအားလုံး (ဆစ်(ခ်) မှ လွဲလို့) ရဲ့ နောက်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ အခြေခံ ဘာသာကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အစ္စလာမ်ဝါဒ ဟာ ရှေ့မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဝါဒအားလုံးကို အသိမှတ်ပြု လက်ခံတဲ့အပြင် အဆိုပါ အယူဝါဒတွေကို ဖော်ထုတ်သူ (ဝါ) ဘုရားတွေကိုလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် တမန်တော်တွေအဖြစ် လေးစားသမှု ပြုတယ်။ ဒေသတွင်း ရှေးဦးပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ဂျူးအယူဝါဒ က နောင်မှာ ထွန်းကားလာတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ် တရားဝင် အသိမှတ်ပြုခြင်း မရှိသလို ခရစ်ယာန် အယူဝါဒကလည်း အလားတူ နောက်ဆုံး ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အယူဝါဒ အစ္စလာမ်ကို တရားဝင် လက်ခံခြင်းမရှိပေမယ့် ရှေ့မှ ဂျူးတို့ရဲ့ ပရောဖက် မောရှေ ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ပရောဖက် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်။ အစ္စလာမ်အယူကတော့ အယူအဆရေးရာ ကွဲပြားမှုတချို့ရှိသော်လည်း ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို လက်ခံတယ်။
သို့သော် အစ္စလာမ် ဝါဒကို စတင်ဖော်ထုတ်သူ မုဟမ္မဒ်ဟာ ထာဝရဘုရား (အလ္လာဟ်အရှင်) ရဲ့ နောက်ဆုံး တမန်တော် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးချိန်မှစလို့ အစ္စလာမ်တရားတော်များ ဟောကြားသောအခါ မလိုမုန်းထား၊ ရန်လိုသူများရဲ့ အကြီးအကျယ် ဆန့်ကျင်၊ ဖိနှိပ် ရန်ပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ မှာ တရားသော ခုခံစစ်ပုံစံ၊ ဘာသာရေး စစ်ပွဲ ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ သို့သော် ဒါဟာ လက်ရှိခေတ်မှာ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေရဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် လွဲမှားအသုံးချမှုကြောင့် အထင်မြင်မှား ယူဆခံနေရတဲ့ ဘာသာရေး စစ်ပွဲမျိုး မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ အစ္စလာမ်ဝါဒမှ ဂျီဟဒ် (Jihad) ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ သဘောက ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေ အလ္လာဟ်အရှင်ရဲ့ ကုရ်အာန် (Quran) ကျမ်းစာပါ သွန်သင်ချက်တွေကို မိမိဘာသာ ပုဂ္ဂလိက သဘောအလေးထား၊ ဗဟိုပြု လိုက်နာနိုင်ဖို့ အတွင်းစိတ်သဏ္ဍန်၊ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အကျင့်သီလပိုင်းဆိုင်ရာ တွန်းလှန်ခြင်းသဘော၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အစ္စလာမ် လူမှု့အသိုင်းအဝန် တည်ဆောင်ရေး သဘော၊ တရားဓမ္မကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သဘောနဲ့ မိမိကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုကို မတရား ဖိနှိပ်လာရင် ပြန်လည် တွန်းလှန်နိုင်မှု သဘောစတဲ့ အကြမ်းမဖက်၊ ကောင်းမွန်မှုများကို အခြေခံခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
ဘာသာဖိနှိပ်မှုကို ခုခံကာကွယ်တဲ့ တရားစစ်၊ ဘာသာစစ်တွေ မလွှဲသာလို့ ပြုရရလည်း စစ်ပွဲနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို၊ ကလေးသူငယ်၊ အမျိုးသမီး မထိခိုက်စေဖို့ နဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ တရားမျှတစွာ ကျင့်ကြံပြောဆို၊ ကောင်းမှုလုပ်သူကိုသာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အကြောင်း တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ သတိပေး၊ တားမြစ်မှုတွေကို တမန်တော်ရဲ့ သြဝါဒ လမ်းညွှန်ချက် ဟဒီစ် (Hadeeth) တရားတော်တွေမှာ တွေ့နိုင်တယ်။ အပြစ်မဲ့ လူသားတစ်ဦးမိမိကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရရင် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး သတ်ဖြတ်သလို အပြစ်ကြီးကြောင်း သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေရှိတဲ့ အစ္စလာမ် အယူဝါဒဟာ ယေဘုယျ ခြုံပြောရရင် လူသတ်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး အကြမ်းဖက် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောသာ အဓိက ဖြစ်တယ်။
အစ္စလာမ်အမုန်းရောဂါ (Islamophobia) စွဲကပ်နေသူတွေကို အစ္စလာမ် ဘာသာ နဲ့ လုံးလုံး မသက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရေး အမည်ခံ အဓမ္မဝါဒီ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာရဲ့ ပကတိ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောကို ခွဲခြားမြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ အစ္စလာမ် ဘာသာမှ ကောင်းမွန် မွန်မြတ်တဲ့ တရားတွေကိုလည်း လေ့လာ အသိမှတ်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းလိုတယ်။ လူမိုက်တချို့ ဘာသာရေး ဖွင့်ဆိုချက် အကောက်လွဲ၊ ဘာသာပြင်းထန်စွဲကြီး တလွဲအသုံးချမှုကြောင့် အယူဝါဒ မတူသူတွေကြားမှာ အထင်အမြင်မှားမှု၊ မယုံကြည်နိုင်မှု သံသယတွေ တိုးပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘော၊ ရှေးရိုးစွဲ ဘာသာရေး အယူဝါဒတွေကို အစ္စလာမ် နိုင်ငံတချို့ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်တွေမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ မဏ္ဍိုင်ထား အသုံးပြုနေလို့ ခေတ်အမြင်နဲ့ အံမဝင်ခွင်မကျ ဖြစ်တတ်ပုံတွေကိုလည်း အခြား အယူဝါဒများမှ ကိုးကွယ်သူ ဘာသာဝင် အားလုံး သင်ခန်းစာ ယူစေချင်တယ်။
ဘဟာရီ အယူဝါဒ (Baha’i) ၊ ဘဟာအူလာ (Baha’u’llah 1817-1892 CE)
(၁၉) ရာစု ပါရှန်ဒေသမှာ ရှီယာ အစ္စလာမ် (Shí‘ism) မှ ခွဲထွက် ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ဘဟာရီ အယူဝါဒရဲ့ ပင်မ လက်ကိုင် ယုံကြည်မှုမှာလည်း လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးဟာ မိသားစု တစ်စုတည်းဖြစ်တယ်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း (Peaceful Global Society) ဖြစ်ရမယ်လို့ ခံယူတယ်။
ဘာသာတွေ ပေါ်ထွန်းရာ နေရာ ဒေသ ပထဝီ၊ ခေတ်အခြေအနေ၊ သမိုင်းနောက်ခံ ကို မူတည်ပြီး ဘာသာဦးဆောင်သူ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်လည်း တွဲလျက် ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိတဲ့အတွက် တပါတည်း စစ်ပွဲဖော်ဆောင်မှု သဘောတရားတွေကို ဘာသာကျမ်းဂန်တွေမှာ မလွှဲမရှောင်သာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရခြင်းကလည်းလွဲလို့ ဘာသာအားလုံးရဲ့ သြဝါဒတွေဟာ အကြမ်းမဖက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ ဖော်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကို အထက်ပါ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေမှ တဆင့် သိနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ ဘာသာအားလုံးနီးပါး (တချို့က လွဲလို့) ရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေ ဗမာပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်နေပါတယ်။ ဒီလို မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ ထုံးစံ၊ အတွေးအခေါ်၊ ယုံကြည်မှုတွေ အကုန် ငြိမ်းချမ်းစွာ ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်မှ အတွေးအခေါ်ပေါင်းစုံ ထွန်းကားပြီး ပန်းပေါင်းစုံ ပွင့်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းပြည် အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကြား ခွင့်လွှတ်သည်းခံ၊ လက်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့က ပထမဦးစွာ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ သိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သိခြင်းဟာ နားလည်၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းရဲ့ အစပါ။ ဗုဒ္ဓ လို အလုံးစုံကို သိတော်မူသော သဗ္ဗ္ဗညုတ ဥာဏ် ရအောင် ကျင့်ကြံပြီး သံသရာကြီးတစ်ခုလုံး အလျားလိုက် မြင်၊ အားလုံးနားလည် ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ဘာသာ အယူဝါဒ အားလုံးအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဓိဋ္ဌာန် သဘောမဟုတ်၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပြီး ယေဘုယျ အခြေခံ ကောင်းမွန်တဲ့ သဘောတွေကို သိနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
စာဖတ်သူကို စိတ်ပျက်စေလိုခြင်း မရှိပေမယ့် အမှန် ဆိုရရင် အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒတွေရဲ့ သဘောတွေကို ပညာရေးစနစ် ကောင်းမွန်တဲ့၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေမှာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် သင်ဖူးသူ လူတိုင်း နားလည် သဘောပေါက် ထားကြပါတယ်။ အကြောင်းက ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ ဘာသာအယူဝါဒ လေ့လာခြင်းကို သမိုင်း၊ ပထဝီ ဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာသလို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအနေနဲ့ စနစ်တကျထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု သဘောမပါ (Non-Devotional Study)၊ ပညာရပ်ဆန်ဆန် (Academically) ဘာသာအယူဝါဒတွေကို လေ့လာခြင်းကြောင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ မတူကွဲပြားသူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဝါဒ တွေကို ပိုမို နားလည်သဘောလာပြီး တည်ငြိမ်၊ အေးချမ်း၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်နိုင်တဲ့အပြင် တွဲလျက် အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ လူတွေ အကျိုး၊ အကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှု၊ တွေးခေါ် ဆင်ခြင် ပညာ ဥာဏ်ရင့်သန်မှု စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗမာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်ထွန်းစေပြီး စဉ်းစာတွေးခေါ်မှု၊ အသိပညာကို အခြေခံတဲ့ ပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဘာသာအယူဝါဒ သင်ကြား၊ လေ့လာမှုကို ယုံကြည်မှု အခြေခံ သမရိုးကျ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းတွေအပြင် ကိုးကွယ်မှု သဘောမပါ၊ အတွေးအခေါ် ပညာရပ်အနေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံလေ့လာခြင်း (Religious Studies – Secular Study of Religious Beliefs) ကို ကျောင်းပညာရေး (Formal Education) မှာ ထည့်သွင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာသာအယူဝါဒ ကွဲပြားတဲ့ အုပ်စုအချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု ခိုင်မာလာပြီး ဟန်ချက်ညီညီ အတူတကွ နေထိုင်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဘာသာအသီးသီးမှ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းတွေ ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Co-operations) လိုပါတယ်။ ဒီလိုနည်းအားဖြင့် ရှေးရိုးစွဲတွေ၊ အခြေခံဝါဒီတွေ၊ အစွန်းရောက်တွေ ဗမာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှင်သန်၊ မဖွံ့ဖြိုးစေဘဲ တရားမျှတ၊ ဝါဒဖြူစင်၊ ကျင့်ဝတ်သီလ ပြည့်စုံ၊ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတဲ့ လှပတဲ့ အနာဂတ် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ အန္တိမ ပန်းတိုင်ဟာ ရှေ့မမြင်နိုင်တဲ့ အနာဂတ် နောင်ဘဝ လောကုတ္တရာ အရေးသာဖြစ်ပြီး မျက်မှောက် ကမ္ဘာ လောကီ အတွက် အဓိက မဟုတ်ပါ။ တမလွန် ဘဝ သံသရာကောင်းကျိုးအတွက် လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ မှာ ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစွဲကြီးမှုကြောင့် လက်ရှိ လူ့လောက အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ ဘာသာကွဲပြားမှုအပေါ် ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း စတဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ ရန်သူ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အကျင့်အကြံ တွေကို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်နဲ့မျှ လုပ်စရာမလိုတဲ့အကြောင်း၊ ဘာသာအယူဝါဒအသီးသီးက သွန်သင်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတရား၊ လူ့ကျင့်ဝတ် သီလပိုင်း ကောင်းမွန်စေတဲ့ တရားများကို လက်ရှိ လူ့ဘဝမှာ တော်တည့်မှန်ကန်စွာ ကျင့်ကြံခြင်းဖြင့်သာ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော အကျိုးကို ရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း စတဲ့ ဘာသာအယူဝါဒတွေအပေါ် လက်တွေ့အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်မှု အတွင်းအနှစ်သဘောကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ရှိသူအားလုံး နားလည်သဘောပေါက်မှသာ ကမ္ဘာမြေမှာ မတူကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေတဲ့ လူသားအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဖြင့် စိတ္တ၊ သုခ လောကီချမ်းသာကို ရှာဖွေဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့် ဗမာပြည်မှာ လူအများစု ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် တဲ့ ဂေါတမ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် မှ ရတနသုတ်ပါ ကိုယ်ကျိုးစင်စစ်၊ ဘုရား ဖြစ်စေခြင်းငှာ ကျင့်ကြံခြင်း (ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယံ)၊ ဆွေမျိုးဥာတိ (သို့) အမျိုးတူသတ္တဝါတွေရဲ့ သူ့အကျိုးကို ဆောင်ခြင်း (ဥာတတ္ထစရိယံ) တွေထက်ရှေ့ကဦးစားပေးတင် ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အကုန် သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ သတ္တဝါအားလုံး၊ ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ တောတောင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သတ္တလောကဓာတ်တခုလုံးရဲ့ အကျိုးကိုဆောင်ခြင်း (လောကတ္ထစရိယံ) (ဝါ) လူ့လောက အကျိုးကိုဆောင်ခြင်း လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သံသရာ ကင်းလွတ် တဏှာကုန်ဆုံး ငြိမ်းသက်ရာ နိဗ္ဗာန် အတွက် အသင်္ခတ ဓမ္မအစစ်အမှန် ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်း လက်ရှိဘဝမှာပါ လူသားအားလုံး အကျိုးမဲ့ ခံစားရမှု ဒုဂ္ဂတိဘုံ နဲ့ ဝေးပြီး အကျိုးရှိ စံစားရမယ့် သုဂတိဘုံ လောက နိဗ္ဗာန်ကို တွဲလျက်ဖော်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော၊ အယူဝါဒ ရှိသူ တစ်ဦးချင်း ဘာသာလမ်းညွှန်ချက် ကောက်ယူပုံ မှန်ကန်စွာနဲ့ လက်တွေ့ ကျင့်ကြံဖို့ အရေးကြီးတဲ့ သဘော၊ ဘာသာအယူဝါဒ ကွဲပြားသူချင်း ခွဲခြား ဖိနှိပ်ဖို့မလိုတဲ့ သဘော၊ စနစ်တကျ ပညာရပ်ဆန်ဆန် ဘာသာအယူဝါဒတွေကို လေ့လာခြင်းဖြင့် အယူဝါဒ မတူသူချင်း ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရင်း လူ့လောက တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့ သဘောတွေကို အခု စာဖတ်သူအနေနဲ့နားလည်လက်ခံရင် သူတပါးကိုလည်း ဆက်လက် မျှဝေပါ။ ဒါဟာ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘာသာ၊ လူမျိုး ကွဲပြားသူအကြား ရှိနေတဲ့ သံသယ၊ မယုံကြည်မှု၊ အမုန်းတွေကို ဖြေလျော့ကောင်း ဖြေလျော့ပေးနိုင်မယ့် အမုန်းဒဏ်ကြေဆေးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ စာရေးသူ လေ့လာဖူးသမျှ ဝမ်းစာလေးနဲ့ ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ခုလောလောဆယ်မှာ လူသားမျိုးနွယ်တူသူချင်း စာရေးသူ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အသေးငယ်ဆုံး အလုပ်၊ အားထုတ်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်မှာ အလျင်းသင့်ရင် စာရေးသူ ပုဂ္ဂလိက တိမ်းညွှတ်မှုရှိ၊ ယုံကြည်တဲ့ လူသားဝါဒီတွေရဲ့ ဘာသာအယူဝါဒအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ ကျင့်ဝတ်သီလပိုင်း အချက်တွေ လေးစားအသိမှတ်ပြုလိုက်နာကျင့်ကြံပြီး ဘာသာကိုးကွယ်ဆည်းကပ်
လွှမ်းမိုးမှု ကင်းလွတ်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တည်ရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါဦးမယ်။
ဘာသာ အယူဝါဒအားလုံးမှ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ အားလုံး မိရိုးဖလာ အသိ မှ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော အကျိုးအတွက် သမာသမတ်ရှိရှိ၊ လွတ်လပ်မျှတ တွေးခေါ်မျှော်မြင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အထက်တန်းစား ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ နိဂုံးချုပ် ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
၁၆၊ ဂျွန်၊ ၂၀၁၂
ခုနှစ်သက္ကရာဇ် အခေါ် ရှင်းလင်းချက်။ ။
– CE = Common Era (Current Era/Christian Era/Calendar Era /Anno Domini – AD,1 CE = 1 AD
– BCE = Before Common Era
ရည်ညွှန်း နှင့် ကိုးကား။ ။
– Peace Movements World Wide by Marc Pilisuk and Michael N. Nagler, 2011.
– Hope foraGlobal Ethic: Shared Principles in Religious Scriptures by Brian D. Lepard, 2005.
– Selected Political Writings by Mahatma Gandhi, 1996, Hackett Publishing Co., Inc.
– The Bhagavad Gita, An English Translation by Lars Martin Fosse, 2007, at YogaVidya.com.
– Sacred Books of the East, Vol. 10: The Dhammapada and Sutta Nipata, by Max Müller and Max Fausböll, , at sacred-texts.com.
– Treasury of Truth (Illustrated Dhammapada) by Ven. Weragoda Sarada Maha Thero, First Edition, , at www.buddhanet.net.
– The Noble Eightfold Path: The Way to the End of Suffering by Bhikkhu Bodhi, Reprinted , Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka.
– Works by Lao Zi at Project Gutenberg.
– Works by Confucius at Project Gutenberg.
4 Responses to စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာ အယူဝါဒများ – War, Peace And World Religions
ko thet on June 16, 2012 at 10:38 pm
maung maung aye on June 17, 2012 at 12:06 am
ဘာသာအယူတွေအကြောင်း မသိပဲနဲ့ရမ်းရေးနေတယ် ဒီနေ့ လူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကို ဘယ်ဘာသာက ခြိမ်းခြောက်နေသလဲ
U Than Tun on June 17, 2012 at 9:52 am
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းသားဘ၀ကတဲကအခုအချိန်ထိဘာသာရေး(ဗုဒ္ဓဘာသာသာမက၊အခြားဘာသာများပါ)ကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့၊လေ့လာဆဲလူတစ်ယေက်ပါ။ကိုငြိမ်းချမ်းပြောတဲ့ Non-devotional Study ဆိုတဲ.စိတ်ကူးမျိုးဟာလက်တွေ့မှာမလွယ်ကူပေမဲ့၊တစ်ကယ်တန်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော. ဒီကမ္ဘာကြီးမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော့ကိုပပျောက်သွားမှာဘဲလို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်ဗျာ။
ကျေှးှဇူတင်လျက်- ဦးသန်းထွန်း၊ 77-RIT.
Thu Thu on June 20, 2012 at 8:10 am
A fruitful post, same time you should be aware of extreme liberalism.